The Rohingya News Bank : Retno Marsudi
Showing posts with label Retno Marsudi. Show all posts
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့အရင်းအမြစ်တွေ ဆုတ်ယုတ်လာနဲ့ စီးပွားရေးထိခိုက် မှုတွေ ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကနေ နေရပ်စွန့်ခွာလာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကို လုံးဝလက်ခံတော့မှာ မဟုတ် ဘူးလို့ မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ် Muhyiddin Yassin က သောကြာနေ့က ပြောလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2020, Aceh, ARSA, mm, Muhyiddin Yassin, Retno Marsudi, မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်, ရိုဟင်ဂျာ
FM Marsudi says Indonesia will play ‘more effective role’ on Rohingya issue
Published: 04 Feb 2019 09:38
Indonesia will playa“more effective” role under regional and multilateral framework in resolving the Rohingya crisis, its visiting foreign minister has said.
Retno Marsudi made the comment when she met her Bangladesh counterpart AK Abdul Momen on Monday at his parliament office, the foreign ministry said.
Labels: 2019, Bangladesh, Dr AK Abdul Momen, en, Indonesia, News, Retno Marsudi, Rohingya